फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी, कहिलेदेखि हुन्छ सुरु ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी, कहिलेदेखि हुन्छ सुरु ?
काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी काठमाडाैं काेराेना ‘हट स्पट’ बन्दै गएपछि सरकारले फेरी लकडाउन गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशभर एकसाथ लकडाउन गर्ने अवस्था नभएको तर अति प्रभावित ठाउँमा भने लकडाउन हुने बताए ।उनले भने -‘फेरि नेपालमा राष्ट्रव्यापी लकडाउन हुने सम्भावना छैन ।
’ उनका अनुसार संक्रमण अध्यधिक बढ्यो भने ‘हट स्पट’हरुमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन वा सिल वा लकडाउन गर्नसक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले ७ असोजमा निष्कर्ष निकाल्यो, ‘सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघ्यो भने लकडाउन गर्नुपर्छ ।’
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला केहि दिनयता कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। बिहिबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै बढी २५४० जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंमा २०८५, भक्तपुरमा १३५ र ललितपुरमा ३२० सय जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरूको विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८२ जना आइसीयु र २७ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा १८१ वटा आइसीयु वेड रहेकोमा बिहीबारसम्म ८२ जना संक्रमितको आईसीयूमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
यस्तै उपत्यकामा ७६ वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा २७ जना भेन्टिलेटरमा उपचारत भएको डा गौतमको भनाइ छ । डा गौमतले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएकाले अत्यवश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गरे । उनले कोभिड अस्पतालहरुलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राखिएको र आकस्मिक उपचारको लागि २४ घण्टा नै सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
डा गौतमलले लक्षण बिहीन तथा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी घरमै आइसोलेसनमा बस्न पनि आग्रह गरे । उनले घरमा बस्न सम्भव नभएमा टोल फ्रि नम्वार ११३३ मा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरे । उनले होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पतालमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरे ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न सिधै पैसाको कारोबार भन्दापनि विद्युतिय वा कार्डको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै देशभर कोरोनाभाइरस निको हुनेको संख्या ७१ हजार ३४३ पुगेको छ ।
बितेको २४ घण्टामा थप २ हजार ६७५ जना निको भएसँगै कोरोना निको हुनेको कुल संख्या ७१ हजार ३४३ पुगेको हो । हाल कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएकाको प्रतिशत ७२ दशमलब ३ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १८ हजार ४७३ जनाको पीसीआर भएको छ भने यससँगै कुल पीसीआर संख्या ११ लाख ३१ हजार ९५८ पुगेको छ ।
यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित २६ हजार ६४८ पुग्दा आजमात्रै ४,३६४जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै देशभर कोरोना संक्तमितको कुल संख्या ९८,६१७ पुगेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण नभएका कारण संक्रमितको संख्या बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी नेपालमा कोरोनाबाट ४ महिला र ८ जना पुरुष गरी थप १२ जनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ७९ वर्षीया, ललितपुरमा ७३ वर्षीया, भक्तपुरमा ८२ वर्षीया र सुर्खेतमा ८२ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै सुनसरीमा ३९ वर्षीय, धनुषामा ७० वर्षीय, काठमाडौंमा ५८ वर्षीय, ९१ वर्षीय र कस्कीमा ८३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । यस्तै चितवनमा ८१ वर्षीय, ८१ वर्षीय र ९२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ९० पुगेको छ । हालसम्म मनाङ र मुस्ताङमा बाहेक सबै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
यी हुन ८ जिल्ला
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, चितवन, रुपन्देही, सुनसरी, सुर्खेत यसैगरी मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २ जिल्ला संक्रमणमुक्त भएका छन् । जसमा मनाङ र मुस्ताङ रहेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै दशैंमा सार्वजनिक ठाउँमा पिङ नहाल्न र मन्दिरहरूमा नित्य पूजा मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले भने, ‘सबै मन्दिरहरुमा पूजारी मात्र उपस्थित भई नित्यपूजा गर्ने व्यस्थापन मिलाउन मन्दिर व्यवस्थापन समिति, धार्मिक गुठी, स्थानीय तह र प्रशासनलाई आग्रह गर्दछौं।’ उनले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो एक हप्तामा मात्र १० हजार बढी संक्रमित थपिएको भन्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरे ।